काठमाडौँ । साताको छैटौँ दिन अर्थात आज (शुक्रबार) सुनको भाउ फेरि बढेको छ । आज प्रतितोला २ सय रुपैयाँ बढेर छापावाल सुन प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा पुगेको छ । हिजो तोलामा ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज २ सय रुपैयाँले बढेर ९८ हजार रुपैयाँमा पुगेको हो। आज …
6 days ago आर्थिक 0
जेठ ९ गते साेमबार | आज साेमबार सुन-चाँदी किन्ने साेचमा हुनुहुन्छ भने, यस्ताे छ आजकाे भाउ ! साताकाे दाेस्राे दिन सोमबार सुन-चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर रहेका नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । आज सुन प्रतितोला ९८ हजार रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने चाँदी प्रतितोला १२ सय ७० रूपैयाँमा कारोबार …
3 weeks ago आर्थिक 0
काठमाडौँ, २२ वैशाख -सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक हजार ४०० ले उकालो लागेर रु ९८ हजार ६०० पुगेको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार २०० मा कारोबार भएको थियो ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु …
April 28, 2022 आर्थिक 0
आइतबार घटेको सुनको मूल्य सोमबार पनि घटेको छ । आइतबार तोलामा चार सय रुपैयाँ घटेको सुनको मूल्य आज तीन सय रुपैयाँ घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला एक लाख ५ सय रूपैयाँमा कारोबार भएके सुनको मूल्य आज एक लाख दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेकको हो । …
April 24, 2022 आर्थिक 0
काठमाडौ । सुनचाँदी बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला रु एक लाख ५०० तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु एक लाख ९०० मा कारोबार भएकामा आज प्रतितोला रु ४०० ले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज …
March 28, 2022 आर्थिक 0
काठमाडौँ / नेपाली बजारमा आज सुनचाँदिको मुल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो (आइतबार) छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज (सोमबार) सुनको मुल्य प्रतितोला चार सय रुपैयाले घटेर एक लाख पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार हुने जनाएको छ । …
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महङ्गो , तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
February 22, 2022 आर्थिक 0
काठमाडौं, नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पछिल्लो १५ महिनायताकै महंगो भएकोछ ।मंगलबार तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेर छापावाल सुनको मूल्य ९७ हजार रुपैयाँ कायम भएको हो । यो मूल्य गत वर्ष कात्तिक २४ गते पछिको सबैभन्दा उच्च रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुनको खरिद बिक्री मूल्य …
आज बुधबार फेरि साेच्नै नसकिने गरि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ सुनकाे भाउ
February 17, 2022 आर्थिक 0
फागुन ५ गते । आज बुधबार फेरि साेच्नै नसकिने गरि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ सुनकाे भाउ । साताको पाँचौं दिन आज बिहीबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला ९५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार १ हजार रुपैयाँले …
आज फेरी बढ्यो सुनकाे मुल्य ! हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?
February 15, 2022 आर्थिक 0
काठमाण्डाै – सुनको भाउ आज पनि बढेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा १२ सय रुपैयाँले बढेर ९६ हजार सात सय रुपैयाँमा पुगेको छ । यो हप्ता सुरु भएयता नै सुनको भाउ तोलामा २५ सय रुपैयाँले बढ्यो । अस्ति आइतवार तोलामा १५ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ५ सय रुपैयाँमा …
February 11, 2022 आर्थिक 0
काठमाडौँ – आज साताको छैटौ दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । शुक्रबार तोलाको ५ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा १ सय रुपैयाले बढेको हो। यसअघि बुधबार पनि सुनको मूल्य तोलाको ३ सय रुपैयाले बढेको थियो । बिहिबार तोलाको ९३ हजार ९ सय रुपैयामा कारोबार …